Duplicate File Finder ( Confusion हटाउनुहोस् र Disc स्पेस बढाउनुहोस् )
तपाईंलाई केही idea छ ? तपाईंको कम्प्युटरमा कती जती फाइलहरु Duplicate होला ? कती फाइलहरु तपाईंले नजानिकन अथवा बिर्सिएर २/३ ठाउमा save गर्नु भएको होला । परिणाम तपाईंको कम्प्युटरको धेरै space यस्तै unnecessary Duplicate फाइलहरुले खाइराखेको हुन्छ । कतीजती फाइल होला अनुमान लगाउनुहोस् त ? ...megabytes अथवा gigabytes सम्म पनि हुन सक्छन । अब तपाईंले कसरी पत्ता लगाउने कि कुन कुन फाइल कहाँ कहाँ Duplicate भएर बसेका छन भनेर ? हामीले एक एक फोल्डर केलाएर हेर्नु सम्भब नै छैन र यदि केलाउन नै बसियो भने पनि दिनभरी लाग्न सक्छ ।
यस्तै समस्या समाधानको लागि Auslogics Duplicate File Finder साहायक सिद्द हुन सक्छ । यो पावरफुल र फ्री utility तपाईंको यो समस्या १००% समाधान त गर्छ नै , यस्को मद्घतले तपाईं आफ्नो कम्प्युटरको फ्री space ५०% सम्म increase गर्न सफल हुनु हुनेछ ।
software चलाऊन सजिलो छ ट्राइ गरेर हेर्नुहोला केही समस्या आएमा लेख्नु होला ।
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 5:29 PM